Irma, isiphepho esikhulu esisha esiqonde eCaribbean | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho nje wonke umuntu esenakho lokhu imiphumela eshiywe yisiphepho uHarvey ngenkathi idlula eTexas, isiphepho esisha, sabhapathizwa ngegama lika U-Irma, uya eCaribbean. Ngethuba lokufinyelela nase-United States, kungokwesiphepho esaziwayo esibizwa nge- «Cape Verde hurricane».
Lezi zinhlobo zeziphepho zibizwa kanjalo ngoba zakha empumalanga ye-Atlantic, eduze kweziqhingi zaseCape Verde. Ukudabula i-Atlantic, izivunguvungu zaseCape Verde zivame ukugqama ngokuba ngezinye zeziphepho ezinkulu nezinamandla kakhulu. Izibonelo zalokhu zingatholakala eSiphepho uHugo, esafinyelela esigabeni 5, esaba nomthelela ePuerto Rico, eSaint Croix naseNingizimu Carolina, sashiya umonakalo omkhulu ngonyaka we-1989. Esinye isibonelo iSiphepho u-Ivan ngo-2004 esigabeni sesi-5, esine Amandla "angakaze abonwe ngaphambili" ezindaweni eziphansi ezinomoya omkhulu we-275km / h.
1 I-Irma yisiphepho esingaba yingozi
2 IPuerto Rico iyazilungiselela
3 Ngubani oqamba iziphepho?
I-Irma yisiphepho esingaba yingozi
Isiphepho u-Irma njengamanje
U-Irma uqanjwe njengesiphepho esishisayo ngoLwesithathu ekuseni. NgoLwesine ntambama, bese kuvele kube yisishingishane sohlobo lweCategory 3, esinemimoya engu-185km / h. Lokhu kuqiniswa okuqhumayo kwaziwa ngokuthi "ukukhuphuka okusheshayo.", njengoba kuchaziwe yi Isikhungo Seziphepho Sikazwelonke. Leli gama linikezwa lapho kukhona ukwanda kwesivinini somoya okungenani esingu-56km / h ngaphansi kwamahora angama-24.
Endabeni kaHarvey, sikwazi ukubona into efanayo. Kwakunokukhuphuka okusheshayo ngaphambi kokuwela phansi, ukuyikhuphukela esigabeni 4 lapho isondela ngaseCorpus Christi. Kodwa-ke, yize bekungalindelwa ukuthi ingaqina, bambalwa abebengathi izofinyelela ngamandla amakhulu phambilini, lapho bekulindelwe ukuthi ingafinyelela esigabeni 1, okungenani 2. Ngesinye isikhathi, izinto zomzuzu wokugcina zidala ushintsho olukhulu , zombili eziphephweni nakwezinye izimo zezulu.
Ku-Irma, izibikezelo zamanje nezisemthethweni ezivela eNational Hurricane Center zikhomba lokho izoqhubeka nokuqina njengoba uya entshonalanga ezinsukwini ezinhlanu ezilandelayo. Kungenzeka kakhulu ukuthi ngalo Lwesibili, kube sekuvele kube yisiphepho esigabeni 4. Lesi sigaba, esikalini seSaffir-Simpson, siqukethe isivinini somoya esiphakathi kuka-210 no-249km / h, esinengcindezi emaphakathi kwamamiligrebha aphakathi kuka-920 no-944. Umonakalo ongaba khona usabalele ezinhlakeni zokuvikela, ukuwa kophahla ezakhiweni ezincane, nezikhukhula ezindaweni eziphakathi nezwe, njengeHarvey.
Isibikezelo sika-Irma sangoLwesine olulandelayo usuku 7
IPuerto Rico iyazilungiselela
Yize kungenzeki ukwazi kahle ukuthi iSiphepho u-Irma sizofika ePuerto Rico, umasipala wesiqhingi waseCulebra usevele uyalungiselela, ecabanga ukuthi kuzokwenzeka. IMeya uWilliam Iván Solís uthe, «Asikwazi ukuthembana. Sinxusa abantu ukuthi bazilungiselele. Masingalindi kuze kube umzuzu wokugcina ». Imeya iphinde ikhombise ukuthi uma isiphepho sigcina sithinte iPuerto Rico, izindawo lapho kunezindawo zokuhlala zamapulangwe nezinc, kanye namakhaya angomahamba nendlwana, zizokhishwa.
Ngokucabangela izibikezelo zeNational Hurricane Center, U-Irma wayengadlula enyakatho yePuerto Rico phakathi koLwesithathu noLwesine wesonto elilandelayo "njengesiphepho esikhulu." Ngomoya ongaphezu kuka-178km / h lokho bekuzovele kube isigaba 3. "Ukuze inhlekelele ingenzeki, sizolungiselela njengoba silungiselela minyaka yonke", USolís ugwetshwe.
Ngubani oqamba iziphepho?
Unyaka nonyaka kulungiswa uhlu olunamagama iziphepho ezenzeka isizini yonke ezizowathola. Lezi zinhlu eziphindaphindwa njalo eminyakeni eyisi-6, zifaka igama lohlamvu ngalunye lwezinhlamvu zamagama (kungabalwa izinhlamvu u-Q, U, X, Y no-Z) kanye namanye amagama abesilisa nabesifazane. Kulo nyaka ukwenza isibonelo, inkathi yesiphepho yaqala ngo-Arlene, ngo-Ephreli, kwaqala igama ngo-A. Harvey, okwakungu-H, incwadi elandelayo kwakuzoba yimina, yingakho u-Irma elandelayo.
Lapho isiphepho sibhubhisa ikakhulukazi ezweni, igama laso liyasuswa kufakwe elinye ohlwini. Futhi igama lakho ngeke lisetshenziswe eminyakeni eyishumi ezayo ukugwema ukudideka. Ngale ndlela, ngokuqamba isiphepho ngegama, singasheshe sitholakale kalula ngesikhathi. Lolu hlelo lwakhiwa ngo-1953 yiNational Hurricane Center, e-United States.
Sizobika noma yikuphi ukuvela kokuvela kuka-Irma.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Irma, isiphepho esikhulu esisha esiqonde eCaribbean
Indawo elingana neDenmark e-Amazon endalini yezimayini